Ukuphupha ngemoto yekampu Discover ▷ Discover online ▷ ➡️
Ukuba uva igama "imoto", ungathanda ukupakisha izinto zakho kwangoko kwaye ubuze "Siyaphi?". Ikharavani yindlela ezimeleyo yokuhamba. Unokuthatha isigqibo sokuba ufuna ukuhlala phi okanye apho ukhetha ukuqhubeka ngokuxhomekeke kwimood yakho.
Kwiintsapho ezinabantwana, ukukhempisha eholideyini kuhlala kumnandi ngakumbi. Chitha iiveki ezimbalwa enkampini ngendlela engaqhelekanga, kude nemikhwa yesiqhelo, phakathi kwabanye abahlobo abasenkampini onokuhlala nabo emlilweni ebusuku kwaye wonwabe kunye nokuzonwabisa kunye.
Ngokuqinisekileyo kufuneka uluthande olu hlobo lweholide kwaye kwabanye abantu akunakucingwa ukuba wabelane ngomhlaba osondeleyo kunye nommelwane wakho wevenkile. Ummelwane ongasekunene angabhiyozela ixesha elide kakhulu kwaye engxola kakhulu, abantwana abakwelinye icala lesitalato bahlala bekhala, okanye umsi ovela kubusuku be-barbecue uvuthuza ukusuka ngasekhohlo usiya kwindawo yabo yokuhlala. Ukunyamezelana kufuneka ibe lolunye lweempawu zakho, ukuba ufuna ukuchitha iholide apha kwaye awufuni kuzihlupha ngemikhwa yabanye.
Kodwa uthini ngoku ngokulala xa uphupha nge-motorhome? Utolikwa njani lo mfuziselo wamaphupha kumanqanaba ahlukeneyo okutolika kwephupha?
1 Uphawu lwephupha «imoto yekhaya» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «imoto yekhaya» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «imoto yekhaya» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «imoto yekhaya» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokwenkcazo ngokubanzi yamaphupha, isixa esithile sibonakaliswa kumfanekiso wephupha "lemoto". Ukungathobeki wephupha, ohlala eziva engathandekiyo kwisakhono sakhe sokwenza izigqibo. Uziva ngathi uyazibophelela njengomqobo osongelayo kwinkululeko yakhe.
Oku kucaca ngakumbi xa uzibona uqhuba kwilizwe liphela ngamava aphuphayo ekharavani. Ukuphupha kufuneka kuhlawule ingqalelo ekhethekileyo kwiimvakalelo xa ulele kwaye uzame ukuzikhumbula.
Indawo yemoto inokuba luphawu lwenyathelo kunye nokuzonwabisa. Unomdla ngayo yonke into entsha kwaye ungoyiki uguquko olunokuza nayo.
I-motorhome njengophawu lwephupha inokuqondwa njengomnqweno woqhakamshelwano olungaphezulu kwezentlalo okanye ukubonakaliswa kwezinto esele zikho. Umthamo woqhakamshelwano Yiba ngamaphupha. Kusenokwenzeka ukuba bavuleke, bangeneke, kwaye bonwabe ekuhlaleni nabanye abantu.
Ukubuyela umva kwikharavani kukwenza kucace ukuba ukuphupha rhoqo Ukubakho kokurhoxa kufuneka akwazi ukwenza umgama obalulekileyo kuye nanini na.
Uphawu lwephupha «imoto yekhaya» - ukutolikwa kwengqondo
Iphupha le-motorhome linokubonisa ngokwembono yengqondo yokuchazwa kwephupha ukuba umntu ophuphileyo uyakwazi ukuhlala ngokuzimeleyo kwaye akathintelwa zizithintelo ezibekwe endleleni zokuqhubeka nendlela yabo.
Kwelinye icala, oku kungabonisa isidingo esingxamisekileyo umnqweno yokuphupha emva komhlala phantsi, ukuphumla kunye nokuphumla. Mhlawumbi ubandakanyeka kakhulu kuxanduva lobomi bemihla ngemihla kwaye ufuna ukuphuma kubo kube kanye. Inkampu iyafana nenkululeko, indalo kunye nokuzimela. Kanye njengokuba umntu esiya eholideyini kunye nenkampu, umphefumlo wephupha ulangazelela ukuphumla, ukuncwina kunye nokukhanya.
Abantu odibana nabo ngexesha lekhefu banokwenza njalo apha. ukwenza lula yobomi. Naphi na apho uxanduva lwakho noxanduva lwakho ekhaya, ukujongana nabahlobo abasenkampini kunokuba yinto nje engekho sikweni kwaye ingabopheleli. Ukuphupha kuya kufuneka uzivumele ukuba uphume kule treadmill rhoqo kubomi bokwenyani, kuba nabahlobo abasondeleyo bafuna ixesha elithe cwaka amaxesha ngamaxesha ukuze bakwazi ukubuyela kunye.
Uphawu lwephupha «imoto yekhaya» - ukutolika kokomoya
Ngokwembono yokomoya, umfanekiso wephupha "yemoto" ufuzisela ukuzimela y Libertad lomntu. Nokuba sihlala siziva sibotshiwe kwaye sixhomekeke, sihlala sikhululekile emoyeni.